2 အဆင့် Beverage သာသနာဖျော်ရည်သာသနာ, ပလပ်စတစ်သောက်သာသနာ
ဤသည်2အဆင့် Beverage သာသနာအသီးအသီးအရည်တစ်ဦးဂါလံအထိကိုင်ထားနိုင်သည့်နှစ်ခုအလွှာရှိပြီး; သငျသညျ ... လင်မနစ်, လာကြတယ်, iced လက်ဖက်ရည်နှင့်ထို့ထက် ပို. အားဖြင့်သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်စဉ်းစားနိုင်ဘာမှကဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ခု spigots နှင့်အတူဤနှစ်ခုဆင့်အဖျော်ယမကာသာသနာပါတီများမှာအဖျော်ယမကာ, လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များ, ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်ပိုပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘို့စုံလင်သည်။ ဒါဟာတဦးတည်းအဆင်ပြေပွဲချင်းပြီးထံမှအဖျော်ယမကာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးအစေခံဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာအိမ်တွင်းသို့မဟုတ်အပြင်မှာသုံးစွဲဖို့ကဘေးကင်းလုံခြုံသော shatterproof acrylic ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခြေကွန်တိန်နာရေခဲအတွက်သို့မဟုတ်အသီးသို့မဟုတ်ပန်းပွင့်နှင့်တူအလှဆင်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ဆင့်နှုန်း 1 ဂါလံရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ရှိရှိကွှေးကျွော2ဂါလန်ကျင်းပရန်သုံးနိုင်; သာသနာများအတွက်မယို, လွယ်ကူတဲ့ဆွဲမျိုးတွင်ပါရှိပါတယ်။ အပိုဆောင်းအအေးများအတွက်ရေခဲနှင့်ပြည့်စုံမည်နိုငျသော compartmentalized အခြေစိုက်စခန်း Features; လည်းကျယ်ပြန့်ပါးစပ်နှင့်ဖြုတ်အဖုံးပါရှိပါတယ်။ လက်ကိုင်ကပိုရေခဲ, အသီး, ဒါမှမဟုတ်ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ထည့်သွင်းဘို့ပယ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ရန်လွယ်ကူစေသည်; ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံသို့မဟုတ်အသစ်အိမ်ပိုင်ရှင်အဘို့ကြီးစွာသောဆုကြေးဇူးကိုမှန်ကန်စေသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖျော်ယမကာသာသနာအသီးအသီးအရည်တစ်ဦးဂါလံအထိကိုင်ထားနိုင်သည့်နှစ်ခုအလွှာရှိပြီး; သင်အစဉ်အဆက်စဉ်းစားနိုင်ဘာမှ ... လင်မနစ်, လာကြတယ်, iced လက်ဖက်ရည်နှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူကဖြည့်နိုင်ပါတယ်
ဤသည် 2-အဆင့် Beverage သာသနာတစ်ကြော့ stackable ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်; ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်အဖျော်ယမကာသာသနာကိုလည်းတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး, နွေဦး / နွေရာသီလအတွင်းမိုးလုံလေလုံနှင့်ဖျော်ဖြေမှုပြင်ပအဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးပါပဲ။ နွေဦးပေါက်ဥယျာဉ်ကိုပါတီများ, နွေရာသီကင်ဆိုင်တွေသို့မဟုတ်သားသမီးရဲ့မွေးနေ့ပါတီများအတွက်စုံလင်သော။